646s ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှခေတ်သစ်စစ်သားအဖြစ်နာဇီ - ဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။ images and subtitles
နာဇီ - ဒီကမ္ဘာမှာပိုဆိုးတာတစ်ခုခုရှိလား။ ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကနာဇီဖုတ်ကောင်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာမာစတာပြိုင်ပွဲဖုတ်ကောင်တွေနဲ့မဆက်ဆံဘူး ဒီနေ့ Nope အစားဒီနေ့ငါတို့အသက်ရှင်နေတဲ့သက်ရှိအမျိုးမျိုးကိုငါတို့နောက်ဆုံးအရစ်ကျနဲ့ဆက်ဆံနေတယ် ဘယ်သူဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။ ခေတ်သစ်စစ်သားလား၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဟာနာဇီလား။ ထိုနေ့သည် ၁၉၄၁ ဖြစ်ပြီးဥရောပ၌စစ်ပွဲသည်အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာအတွက်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေသည်။ ပြင်သစ်သည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်၎င်း၏ကျွန်းငယ်လေးတွင်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည် ဆိုဗီယက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးနောက်တစ်ခုကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ။ ဟစ်တလာအတွက်နွေ ဦး ရာသီဖြစ်သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီနှောင်းပိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာနာဇီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ UFO တည်ဆောက်နေသည့်လျှို့ဝှက်နာဇီဓာတ်ခွဲခန်းများကိုစစ်ဆေးသည်။ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအပြာရောင်မျက်လုံးဆံပင်ဆံပင်မာစတာပြိုင်ပွဲကိုယ်ပွားနှင့်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည် အိုင်းစတိုင်းကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးဂျာမနီအတွက်နျူကလီးယားဗုံးတည်ဆောက်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်စက်။ သူ၏သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်ပတ်နေသောအချိန်စက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုသံသယရှိကြသည်ဟုဟစ်တလာကပြောကြားခဲ့သည် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပေးရန်သူ၏အစောင့်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဟစ်တလာက“ ဟေ့ဟင်ဟင့်မင့်ကိုဘာကြောင့်မျှော်လင့်မထားကြတာလဲ၊ တတိယအနာဂတ်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပေးပါ ဒီနေရာကိုပြန်လာပြီးနာဇီဂျာမနီမှာဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲဆိုတာအားလုံးကိုပြောပြပါ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာကော? သူ၏ Fuhrer ကိုစိတ်ပျက်စေမည့်သူမဟုတ်ပါ၊ Hans Nazi Nazi သည်ဂျာမန်အချိန်ကာလသို့ဝင်ရောက်လာသည် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဟာလေထဲကိုကျသွားတယ်။ ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်နာဇီ Hans သည် Rammstein စစ်တပ်အလယ်တွင် smack-dab ပေါ်လာသည် အခြေစိုက်စခန်း, အကြီးဆုံးရေခြားမြေခြားအမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ဥရောပတိုက်တွင်နေတိုးတပ်ဖွဲ့၏စွမ်းအား၏အရံ။ အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်အဖြစ်သို့တည့်တည့်ဝင်လာပြီးအနာဂတ်သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်သွားသည်ကို Hans ကသိသည် မှားယွင်းနေတယ်။ အခုသူကနာဇီ Hans ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုအဆုံးသတ်တော့မယ် ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်နှင့်မည်သူအနိုင်ရလိမ့်မည်ကိုတွက်ဆသည်။ စစ်သားတစ် ဦး ချင်းစီ၏လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ကိရိယာများကိုအပိုင်းပိုင်း ခွဲ၍ ခွဲပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူပေါ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားနှင့်နာဇီတို့၏တူညီချက်များ စစ်သားပေါများဖြစ်ကြသည်။ နာဇီစစ်သည်သည်သေနတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ဗဟုသုတဖြင့်အခြေခံလေ့ကျင့်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် နာဇီဂျာမနီရှိဟစ်တလာလူငယ်များ၏ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ခြေလျင်နည်းနာအချို့ပင်ရှိသည်။ အမျိုးသားများအစီအစဉ်ဖြစ်သော ၁၄ နှစ်အစောပိုင်းတွင်ဟစ်တလာလူငယ်များတွင်ပါဝင်ရန်ယောက်ျားလေးများကိုအားပေးခဲ့သည် ထိုအရာသည်ယူအက်စ်ရှိကင်းထောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပို၍ ကြီးမားသောအလေးထားမှုသာဖြစ်သည် အမျိုးသားရေးဂုဏ်ယူမှု၊ ဂျူးတွေကိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ရန်သင်ယူခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်မှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကဂျာမနီကိုဆုံးရှုံးမှုအပေါ်မကျေနပ်မှုကလူငယ်များအတွက်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည် သူဟာဂျာမနီကယောက်ျားလေးတော်တော်များများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ခဲ့တယ် စစ်သားဖြစ်လာရန် ခေတ်သစ်အမေရိကတွင်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်မျိုးမရှိကြပါ သာမန်အရပ်သားနောက်ခံ။ တစ်ချိန်ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်ခဲ့ချိန်တွင်နှစ် ဦး စလုံး၏သင်တန်းသည်အလွန်တူညီခဲ့သည်။ နာဇီစစ်သားတစ် ဦး သည် ၁၆ ပတ်ကြာကန ဦး လေ့ကျင့်မှုခံယူပြီးသူတို့၏ဌာနသို့မပို့မီကခံနိုင်ရည်ရှိသည် သူတို့ကနောက်ထပ်လေ့ကျင့်မှုခံယူလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားသည် ၈ ပတ်ကြာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးသူ့ကိုလှည့်ရန် အရပ်သားတစ် ဦး မှစစ်သားတစ် ဦး၊ ထို့နောက် ၁၆ ပတ်အကြာခြေလျင်ကျောင်းသို့ မည်သည့်စစ်မြေပြင်ကိုလွှမ်းမိုးရမည်ကိုသင်ပေးပါ။ နာဇီစစ်သားများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်လေ့ကျင့်မှုများနှင့်ပထမကမ္ဘာစစ်မှစစ်ပြန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိခဲ့သည် မှသင်ယူရန်။ အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲနာဇီစစ်သားများသည်အခြားလက်နက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသင်တန်းများလည်းရရှိခဲ့သည် သူတို့ရဲ့ယူနစ်, အထူးစက်သေနတ်ပူးတွဲနိုင်ပါသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အမေရိကန်လေ့ကျင့်မှုသည်ဤပုံစံကိုထင်ဟပ်စေပြီးအမေရိကန်ခြေလျင်တပ်သားတစ် ဦး သည်အကျွမ်းတဝင်မျှသာမဟုတ်ပါ လက်နက်တိုင်းနှင့်အတူသူ၏တပ်စုတစ်စုသယ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်လိုအပ်သည် သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသက်သေပြပါ။ ပတ်ပတ်လည်၌ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကနာဇီများထက်အတွေ့အကြုံပိုရှိသည် ကန ဦး လေ့ကျင့်မှုမှထွက်ခွာခဲ့သည့်စစ်သားနှင့်နာဇီသင်တန်းသားများသည်ကမ္ဘာစစ်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခဲ့ရစဉ် ငါစစ်ပြန်ငါခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားသုံးစွဲသောသူဝါရင့်သင်တန်းဆရာများ၏အကျိုးကျေးဇူးရှိသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်အီရတ်ပconflictsိပက္ခများအတွက်မြောက်မြားစွာခရီးစဉ် သို့သျောလညျးနာဇီစစ်သားတစ် ဦး အများကြီးသာ။ ကြီးမြတ်သောစည်းကမ်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနှင့်တစ် ဦး ဟစ်တလာလူငယ်ဘဝမှပေါ်ထွက်လာသောစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း။ လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါတို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတောင်ခေါ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်နာဇီစစ်သား နှင့်သူ၏ဟစ်တလာလူငယ်တွင်သုံးစွဲခဲ့သောသူ၏နှစ်များစွာဝါသနာပါမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည် စစ်သားတစ်ယောက်ကကြံ့ခိုင်မှုနဲ့စစ်တိုက်ချင်စိတ်ရှိရင်။ လက်ချင်းယှဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သားသည်ပိုမိုလေ့ကျင့်မှုများပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဇီစစ်သားထက်။ နာဇီစစ်သားများသည်ခေတ်မှီသော်လည်းလက်ဖြင့်လက်နှင့်လက်ဝှေ့ယမ်းနည်းစနစ်များကိုလေ့လာရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် အမေရိကန်စစ်သားများသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရောနှောကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုသင်ယူခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်စစ်တပ်တစ်ခုလုံး၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးသောကိုယ်ခံပညာအစီအစဉ် သေစေနိုင်သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကိုယ်ခံပညာအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည် နည်းစနစ်များ။ လက်ချင်းယှဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သားကထိပ်ဆုံးတွင်ရပ်နေသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရန်။ စစ်သားနှစ် ဦး လုံးတွင်လက်သီးဆုပ်များနှင့်ပက်ကျိထဲ၌လက်သီးဆုပ်နေခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည် ပွဲစဉ်, ငါတို့တိုက်ပွဲဝင်အလျင်အမြန်အောင်ပွဲအောင်မြင်ရန်ဤအလယ်တန်းကိရိယာများမှလှည့်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာဇီစစ်သားသည် seitengewehr 98 ဓါး / လှံစွပ်ကိုသယ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ၁၅ လက်မအရွယ်ရှိဓါးဖြင့်သေစေနိုင်သောဓားကိုရှေ့တွင်ကပ်ထားနိုင်သည် တစ်လှံစွပ်အဖြစ်ရိုင်ဖယ်။ အမေရိကန်စစ်သားများသည်ဓားနှင့်လည်းမကြာခဏသယ်ဆောင်လေ့ရှိသော်လည်းအထင်ရှားဆုံးမှာအမေရိကန်သည်အမြစ်တွယ်နေသည် တိုတိုအတွက် tool ကို, ဒါမှမဟုတ် e-tool ကို။ e-tool သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ချွန်ထက်သောအနားများရှိသည့်ဂေါ်ပြားတစ်ခုအားအမေရိကန်စစ်သားအားလျင်မြန်စွာခွင့်ပြုသည် သူ့ကိုယ်သူမည်သည့်မြေဆီလွှာတွင်မဆိုတိုက်ခိုက်ရန်နေရာတစ်ခုကိုတူးပါ၊ သို့သော်အမှန်တကယ်ပင်အကြီးအကျယ်ဆိုးရွားသောလက်များဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်သည် လက်နက်။ e-tool တစ်ခုမှ swing တစ်ခုသည်ရန်သူ၏ ဦး ခေါင်းခွံကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ကယ်ရန်ပင်လုံလောက်သည် အကာအကွယ် ဦး ထုပ်မှတဆင့်ခေါင်းကို - လှုပ်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း။ ပြင်းထန်သောထိုးခြင်းလက်နက်နှင့်ပုဆိန်ကဲ့သို့သောလက်နက်များ၏အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် နာဇီနဲ့မတူတာကငါတို့အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်ကိုဒီနေရာမှာအနိုင်ရအောင်လုပ်ပေးမှသာရမယ် ဓား၊ အမေရိကန်အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာသည်တိုက်ပွဲများကိုအလျင်အမြန်တူးရန်လည်းပေးသည် တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေကပို utility ကို။ အနီးအနားတွင်နာဇီစစ်သားကကျော်ကြားသောပစ္စတိုသေနတ်သမား Walther P38 ကိုကိုင်ဆောင်ခဲ့သည် မဟာမိတ်စစ်သားများကသူတို့ကိုစစ်အမှတ်တရလက်ဆောင်များအဖြစ်သူတို့ကိုရှာသောအခါ။ မယုံနိုင်လောက်အောင် P38 သည်အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည် သောင်းကျန်းသူတပ်ဖွဲ့များသည်၎င်းတို့အားနေတိုးစစ်သားများကိုပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၉ မီလီမီတာကျည်ဆန်တစ်စင်းဖြင့်ပစ်ခတ်ထားသော P38 သည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၅၀ အထိရှိပြီးတိကျမှန်ကန်မှုရှိသည် 25-50 မီတာထိရောက်သောပစ်ခတ်ရန်အကွာအဝေးရှိသည်။ တစ်စက္ကန့်လျှင်မီတာ ၃၂၀ အရှိန်မြှင့်အရှိန်ဖြင့် P38 သည်စွဲမှတ်စရာကောင်းသောရပ်တန့်နိုင်စွမ်းရှိသည် ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား။ ၈ ပတ်သာမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်သာရှိသော P38 သည်နာဇီစစ်သားများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ ပစ်မှတ်ကိုကြာရှည်စွာထိန်းထားရန်၊ ထုထည်ထက်တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်မှီခိုပါ မီး ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သည် Nazi P38 သည် Beretta M9 နှင့်ရေတွက်သည်။ Resident Evil ဂိမ်းများအကြိုက်ဆုံး M9 သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ M9 သည် ၉ မီလီမီတာပတ်ပတ်လည်နှင့် ၁၅ ပတ်မဂ္ဂဇင်းပါ ၀ င်ပြီးအလွန်စိတ်ချရသောလက်နက်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်စစ်သားသည်ပြန်လည်သိုလှောင်ရန်မလိုအပ်မီပိုမိုကြီးမားသောပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ လက်နက်တွင်တစ်မိနစ်လျှင် ၃၈၁ မီတာရှိသောအမြန်နှုန်းရှိပြီးပိုမိုထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိသည် နာဇီ P38 ထက်နှင့် ၁၀၀ တွင်နာဇီလက်နက်နှစ်ကြိမ်ကျော်အများဆုံးပစ်ခတ်နိုင်သောအကွာအဝေးရှိသည် အများဆုံးထိရောက်သောအကွာအဝေးများအတွက်မီတာနှင့် 50 မီတာ။ အများဆုံးနှင့်ထိရောက်သောပစ်ခတ်မှုအပိုင်းအခြားများနှင့်စွမ်းရည်နှစ်ဆနီးပါး၊ ဤနေရာတွင်အနိုင်ရရှင်းလင်းစွာခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားနှင့်သူ၏ trusty M9 မှတတ်၏။ အလတ်စားနှင့်တာဝေးပစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နာဇီစစ်သားသည် Karabiner 98k စံနှုန်းကိုသယ်ဆောင်သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျာမန်စစ်တပ်၏ရိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်း K98k သည်အလွန်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးရိုင်ဖယ်ဖြစ်သည့်အာဖရိကမှစစ်မြေပြင်များတွင်စစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ရုရှားအရှေ့ဘက်မျက်နှာစာနှင့်ဆီးနှင်းနှင့်ရေခဲကဲ့သို့ရွှံ့နှင့်မိုးရွာသကဲ့သို့ကောင်းစွာလည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဒီလက်နက်မှာ ၇.၉၂ မီလီမီတာ caliber ပတ်ပတ်လည်မှာပါ ၀ င်ပြီးကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပေးလိမ့်မယ် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၇၆၀ မီတာရှိသောအရွယ်အစားနှင့်အသံကျယ်သောအမြန်နှုန်းကြောင့်ပစ်မှတ်သို့ရောက်သွားသည်။ ရိုင်ဖယ်တွင်သံချွန်များဖြင့်မီတာ ၅၀၀ ထိထိရောက်သောပစ်ခတ်နိုင်သည့်အကွာအဝေးရှိခဲ့သည် အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်မီတာ ၁၀၀၀ အထိတိကျသောမီးကိုလွှတ်ပေးဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမီတာ ၄,၇၀၀ အကွာအဝေးတွင်ရိုင်ဖယ်သည်အလွန်အကွာအဝေးများ၌ပင်ရှိနိုင်သည် တိကျသော်လည်းတိကျသေချာသောပစ်မှတ်တစ်ခုပေါ်သို့ပစ်ချနိုင်လျှင်သေစေနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲရိုင်ဖယ်သည်စွမ်းဆောင်ရည် ၅ မျိုးဖြင့်ကန့်သတ်ထားသဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည် ပစ်မှတ်ဖိနှိပ်ရန်။ အဲဒီအစား, ဂျာမန်ခြေလျင်ပျက်စေရန်, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူပူးတွဲစက်သေနတ်မှီခို ရန်သူတပ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သားကသူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော M4 Carbine ကိုဤရန်ပွဲသို့ယူဆောင်လာသည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်အားဖြင့်ကောလဟလများရှိနေသော်လည်း M4 သည်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်မယ့်အစားလယ်ကွင်းထဲကတစ်ခုခုသုံးဖူးသူတိုင်း ရိုင်ဖယ်သည်အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးနှင့်ရောနှောနေသည့်တိုင်ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပစ်ရန်ပြnoနာမရှိကြောင်းဆောင်းပါးများသိထားသည်။ ရိုင်ဖယ်နည်းနည်းတိုသောနေရာတွင်၎င်းသည် ၅.၅၆ ပတ်ပတ်လည်အခန်းများကိုရပ်တန့်နေသောကြောင့်ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းရှိသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာက၎င်း၏အော်ပရေတာများကအားနည်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည့်သုံးဆယ်ပတ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ တစ် ဦး ပထမ ဦး ဆုံးပတ်ပတ်လည်သတ်ဘို့လုံလောက်သောရပ်တန့်ပါဝါမပေးဘို့။ သို့သော်စက္ကန့် ၉၁၀ မီတာအမြင့်ရှိသံမဏိထိုးဖောက်နိုင်သောခဲယမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သည် ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာသံချပ်ကာကိုဆန့်ကျင်။ ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်း၏ပစ်မှတ်အတွက်အမြင့်ဆုံးထိရောက်သောအကွာအဝေးမီတာ ၅၀၀ နှင့်အကွာအဝေးတစ်ခုအတွက်မီတာ ၆၀၀ ပစ်မှတ်ကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလက်လှမ်းမမီပေးပါ။ ထို့အပြင် M4 သည်ရွေးချယ်နိုင်သောမီးစွမ်းရည်ကိုပေးစွမ်းသည် တာဝေးပစ်တိကျသေချာသောပစ်ခတ်ခြင်း (သို့) အနီးအနားရပ်ကွက်များအတွက် ၃ ခေါက်ပေါက်ကွဲခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အကွာအဝေးသို့ရောက်သောအခါ၊ ရိုင်ဖယ်နှစ်မျိုးလုံးသည်ထိရောက်သောအကွာအဝေးရှိသည့်နှစ်ခုလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် တစ် ဦး ပွိုင့်သို့မဟုတ်လူအရွယ်ပစ်မှတ် - သံမြင်ကွင်းများကိုအသုံးပြုပြီးမီတာ 500 ။ ငါတို့စစ်သားတွေကအချင်းချင်းတိုက်နေတာထက်အများကြီးပိုတိုက်ခိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ၎င်းထက် ကျော်လွန်၍ အကြီးအကျယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်သင်၏ပစ်မှတ်ကိုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေမြင်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ K98k သည် M-4 ကိုပိုမိုကြီးမားသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ကျော်လွန်၍ အနီးကပ်ပျက်စီးစေနိုင်သည် အလတ်စားပ္ပံရန်။ သို့သော် M-4 ထက်ပိုနိမ့်သောနှာခေါင်းအလျင်ဖြင့်ကြီးမားသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သေစေလောက်သည် သူသွားရမည့်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချသည် အမေရိကန်ခြေလျင်တပ်ဆင်ထားသောစံခန္ဓာကိုယ်သံချပ်ကာအားဖြင့်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခုကိုအလွယ်တကူရပ်တန့်ပစ်နိုင်သည် အများဆုံးပ္ပံ။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် M-4 မဂ္ဂဇင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့် M-4 ပစ်ခတ်မှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည် ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားတစ် ဦး မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အားသာချက်တစ်ခုအားမီးတိုက်ခြင်းနှင့်စွမ်းရည် အနီးကပ်ရပ်ကွက်တိုက်ခိုက်ရေးများအတွက် 3- ပတ်ပတ်လည်ပေါကျကှဲမီးပြောင်းပါ။ တစ်ညှပ်နှင့်အတူသုံးအကြီးအကျယ်ကြိမ်ကယ်နှုတ်နိုင်ကြောင်းအနီးကပ်အကွာအဝေးမှာဆိုလိုသည် M4 သည် K98k ကိုမောင်းနှင်နိုင်သော်လည်း M-4 သည်မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစားနှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းထက်သာလွန်သည် အဖြစ်ကောင်းစွာအလယ်အလတ်မှရှည်လျားသောပ္ပံမှာထိပ်ပေါ်မှာ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နာဇီစစ်သားတစ်ယောက်သည်အချိန်အတော်ကြာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သွားလာကြည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်ဖြစ်သည် K98k ကတိကျမှန်ကန်သောကြောင့်ခြေလျင်တပ်သားသည်အကွာအဝေးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနီးကပ်စွာထားနိုင်ခဲ့သည် M4 သည်ထိရန်မျှော်လင့်မထားသည့်အကွာအဝေးတွင်မီးလောင်ခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်နီးကပ်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားအားအနိုင်ရရှိစေသည်။ သို့သော်အလွန်ဝေးကွာသောနေရာတွင်နာဇီစစ်သားနှင့်သူ၏စွမ်းရည်ကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည် ထွက် ၁၀၀ ကိုက်အကွာအထိရှိသောတစ်ယောက်ယောက်ကိုထိတွေ့ပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တိကျမှုနှင့်အတူ။ အဆုံး၌, ငါတို့ခရီးသွားလာနာဇီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အားသာချက်ရှိပါတယ် သူ၏နှစ်များ၌အမျိုးသားရေးဟစ်တလာလူငယ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအားသာချက်ရှိသည် K98k ရိုင်ဖယ်၏တိကျမှုနှင့်အကွာအဝေးကြောင့်အလွန်အမင်းရှည်လျားသောအကွာအဝေးမီး။ သို့သော်အခြားဒေသများရှိခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားတစ် ဦး သည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကြီးစိုးနေသည် လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၈၀ ကျော်အတွင်းသင်တန်းအစီအစဉ်များနှင့်ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကိုများစွာအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ သင်သဘောမတူနိုင်ပါကမည်သူနှစ် ဦး အနက်တစ် ဦး သည်တစ် ဦး ကိုသာအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သနည်း သေမင်းကို မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ယခုသင်အဆုံး၌ရှိနေသည်ဆိုပါကဘာကြောင့်မစောင့်ဘဲနေပါသနည်း ပါတီကဒီမှာဗွီဒီယိုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သွားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဒီကိုဒီမှာကြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ် အစား?! အလျင်အမြန် နှိပ်၍ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ခိုက်သူများနှင့်မတူပါ၊ သင်ရှုံးနိူင်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှခေတ်သစ်စစ်သားအဖြစ်နာဇီ - ဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။
< start="0.329" dur="3.271"> နာဇီ - ဒီကမ္ဘာမှာပိုဆိုးတာတစ်ခုခုရှိလား။ >
< start="3.6" dur="5.32"> ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကနာဇီဖုတ်ကောင်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာမာစတာပြိုင်ပွဲဖုတ်ကောင်တွေနဲ့မဆက်ဆံဘူး >
< start="8.92" dur="1"> ဒီနေ့ >
< start="9.92" dur="3.36"> Nope အစားဒီနေ့ငါတို့အသက်ရှင်နေတဲ့သက်ရှိအမျိုးမျိုးကိုငါတို့နောက်ဆုံးအရစ်ကျနဲ့ဆက်ဆံနေတယ် >
< start="13.28" dur="1"> ဘယ်သူဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။ >
< start="14.28" dur="2.91"> ခေတ်သစ်စစ်သားလား၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဟာနာဇီလား။ >
< start="17.19" dur="4.36"> ထိုနေ့သည် ၁၉၄၁ ဖြစ်ပြီးဥရောပ၌စစ်ပွဲသည်အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာအတွက်အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေသည်။ >
< start="21.55" dur="4.27"> ပြင်သစ်သည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်၎င်း၏ကျွန်းငယ်လေးတွင်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည် >
< start="25.82" dur="3.31"> ဆိုဗီယက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးနောက်တစ်ခုကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ။ >
< start="29.13" dur="4.24"> ဟစ်တလာအတွက်နွေ ဦး ရာသီဖြစ်သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီနှောင်းပိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ >
< start="33.37" dur="5.17"> စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာနာဇီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ UFO တည်ဆောက်နေသည့်လျှို့ဝှက်နာဇီဓာတ်ခွဲခန်းများကိုစစ်ဆေးသည်။ >
< start="38.54" dur="4.47"> မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအပြာရောင်မျက်လုံးဆံပင်ဆံပင်မာစတာပြိုင်ပွဲကိုယ်ပွားနှင့်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="43.01" dur="4.25"> အိုင်းစတိုင်းကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးဂျာမနီအတွက်နျူကလီးယားဗုံးတည်ဆောက်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်စက်။ >
< start="47.26" dur="4.37"> သူ၏သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်ပတ်နေသောအချိန်စက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုသံသယရှိကြသည်ဟုဟစ်တလာကပြောကြားခဲ့သည် >
< start="51.63" dur="1.94"> စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပေးရန်သူ၏အစောင့်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ >
< start="53.57" dur="3.64"> ဟစ်တလာက“ ဟေ့ဟင်ဟင့်မင့်ကိုဘာကြောင့်မျှော်လင့်မထားကြတာလဲ၊ တတိယအနာဂတ်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပေးပါ >
< start="57.21" dur="3.8"> ဒီနေရာကိုပြန်လာပြီးနာဇီဂျာမနီမှာဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲဆိုတာအားလုံးကိုပြောပြပါ >
< start="61.01" dur="1.65"> ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာကော? >
< start="62.66" dur="4.3"> သူ၏ Fuhrer ကိုစိတ်ပျက်စေမည့်သူမဟုတ်ပါ၊ Hans Nazi Nazi သည်ဂျာမန်အချိန်ကာလသို့ဝင်ရောက်လာသည် >
< start="66.96" dur="2.74"> ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဟာလေထဲကိုကျသွားတယ်။ >
< start="69.7" dur="5.43"> ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်နာဇီ Hans သည် Rammstein စစ်တပ်အလယ်တွင် smack-dab ပေါ်လာသည် >
< start="75.13" dur="5.03"> အခြေစိုက်စခန်း, အကြီးဆုံးရေခြားမြေခြားအမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ဥရောပတိုက်တွင်နေတိုးတပ်ဖွဲ့၏စွမ်းအား၏အရံ။ >
< start="80.16" dur="4.68"> အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်အဖြစ်သို့တည့်တည့်ဝင်လာပြီးအနာဂတ်သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်သွားသည်ကို Hans ကသိသည် >
< start="84.84" dur="5.17"> မှားယွင်းနေတယ်။ အခုသူကနာဇီ Hans ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုအဆုံးသတ်တော့မယ် >
< start="90.01" dur="3.1"> ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်နှင့်မည်သူအနိုင်ရလိမ့်မည်ကိုတွက်ဆသည်။ >
< start="93.11" dur="4.14"> စစ်သားတစ် ဦး ချင်းစီ၏လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ကိရိယာများကိုအပိုင်းပိုင်း ခွဲ၍ ခွဲပါမယ်။ >
< start="97.25" dur="2.62"> နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူပေါ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ >
< start="99.87" dur="4.26"> လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားနှင့်နာဇီတို့၏တူညီချက်များ >
< start="104.13" dur="1.01"> စစ်သားပေါများဖြစ်ကြသည်။ >
< start="105.14" dur="4.269"> နာဇီစစ်သည်သည်သေနတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ဗဟုသုတဖြင့်အခြေခံလေ့ကျင့်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည် >
< start="109.409" dur="5.121"> နာဇီဂျာမနီရှိဟစ်တလာလူငယ်များ၏ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ခြေလျင်နည်းနာအချို့ပင်ရှိသည်။ >
< start="114.53" dur="5.06"> အမျိုးသားများအစီအစဉ်ဖြစ်သော ၁၄ နှစ်အစောပိုင်းတွင်ဟစ်တလာလူငယ်များတွင်ပါဝင်ရန်ယောက်ျားလေးများကိုအားပေးခဲ့သည် >
< start="119.59" dur="4.19"> ထိုအရာသည်ယူအက်စ်ရှိကင်းထောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပို၍ ကြီးမားသောအလေးထားမှုသာဖြစ်သည် >
< start="123.78" dur="3.19"> အမျိုးသားရေးဂုဏ်ယူမှု၊ ဂျူးတွေကိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ရန်သင်ယူခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ >
< start="126.97" dur="4.48"> ပထမကမ္ဘာစစ်မှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကဂျာမနီကိုဆုံးရှုံးမှုအပေါ်မကျေနပ်မှုကလူငယ်များအတွက်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည် >
< start="131.45" dur="5.03"> သူဟာဂျာမနီကယောက်ျားလေးတော်တော်များများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ခဲ့တယ် >
< start="136.48" dur="1.66"> စစ်သားဖြစ်လာရန် >
< start="138.14" dur="4.55"> ခေတ်သစ်အမေရိကတွင်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်မျိုးမရှိကြပါ >
< start="142.69" dur="1.57"> သာမန်အရပ်သားနောက်ခံ။ >
< start="144.26" dur="3.9"> တစ်ချိန်ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်ခဲ့ချိန်တွင်နှစ် ဦး စလုံး၏သင်တန်းသည်အလွန်တူညီခဲ့သည်။ >
< start="148.16" dur="4.56"> နာဇီစစ်သားတစ် ဦး သည် ၁၆ ပတ်ကြာကန ဦး လေ့ကျင့်မှုခံယူပြီးသူတို့၏ဌာနသို့မပို့မီကခံနိုင်ရည်ရှိသည် >
< start="152.72" dur="1.73"> သူတို့ကနောက်ထပ်လေ့ကျင့်မှုခံယူလိမ့်မယ်။ >
< start="154.45" dur="3.81"> ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားသည် ၈ ပတ်ကြာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးသူ့ကိုလှည့်ရန် >
< start="158.26" dur="4.74"> အရပ်သားတစ် ဦး မှစစ်သားတစ် ဦး၊ ထို့နောက် ၁၆ ပတ်အကြာခြေလျင်ကျောင်းသို့ >
< start="163" dur="2.53"> မည်သည့်စစ်မြေပြင်ကိုလွှမ်းမိုးရမည်ကိုသင်ပေးပါ။ >
< start="165.53" dur="5.039"> နာဇီစစ်သားများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်လေ့ကျင့်မှုများနှင့်ပထမကမ္ဘာစစ်မှစစ်ပြန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိခဲ့သည် >
< start="170.569" dur="1.181"> မှသင်ယူရန်။ >
< start="171.75" dur="4.48"> အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲနာဇီစစ်သားများသည်အခြားလက်နက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသင်တန်းများလည်းရရှိခဲ့သည် >
< start="176.23" dur="3.25"> သူတို့ရဲ့ယူနစ်, အထူးစက်သေနတ်ပူးတွဲနိုင်ပါသည်။ >
< start="179.48" dur="4.79"> မျက်မှောက်ခေတ်အမေရိကန်လေ့ကျင့်မှုသည်ဤပုံစံကိုထင်ဟပ်စေပြီးအမေရိကန်ခြေလျင်တပ်သားတစ် ဦး သည်အကျွမ်းတဝင်မျှသာမဟုတ်ပါ >
< start="184.27" dur="4.21"> လက်နက်တိုင်းနှင့်အတူသူ၏တပ်စုတစ်စုသယ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်လိုအပ်သည် >
< start="188.48" dur="1.08"> သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသက်သေပြပါ။ >
< start="189.56" dur="5.25"> ပတ်ပတ်လည်၌ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကနာဇီများထက်အတွေ့အကြုံပိုရှိသည် >
< start="194.81" dur="4.31"> ကန ဦး လေ့ကျင့်မှုမှထွက်ခွာခဲ့သည့်စစ်သားနှင့်နာဇီသင်တန်းသားများသည်ကမ္ဘာစစ်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခဲ့ရစဉ် >
< start="199.12" dur="4.03"> ငါစစ်ပြန်ငါခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားသုံးစွဲသောသူဝါရင့်သင်တန်းဆရာများ၏အကျိုးကျေးဇူးရှိသည် >
< start="203.15" dur="3.02"> အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်အီရတ်ပconflictsိပက္ခများအတွက်မြောက်မြားစွာခရီးစဉ် >
< start="206.17" dur="4.211"> သို့သျောလညျးနာဇီစစ်သားတစ် ဦး အများကြီးသာ။ ကြီးမြတ်သောစည်းကမ်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနှင့်တစ် ဦး >
< start="210.381" dur="4.619"> ဟစ်တလာလူငယ်ဘဝမှပေါ်ထွက်လာသောစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း။ >
< start="215" dur="4.04"> လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါတို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတောင်ခေါ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်နာဇီစစ်သား >
< start="219.04" dur="4.41"> နှင့်သူ၏ဟစ်တလာလူငယ်တွင်သုံးစွဲခဲ့သောသူ၏နှစ်များစွာဝါသနာပါမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည် >
< start="223.45" dur="2.71"> စစ်သားတစ်ယောက်ကကြံ့ခိုင်မှုနဲ့စစ်တိုက်ချင်စိတ်ရှိရင်။ >
< start="226.16" dur="4.56"> လက်ချင်းယှဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သားသည်ပိုမိုလေ့ကျင့်မှုများပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည် >
< start="230.72" dur="1.48"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဇီစစ်သားထက်။ >
< start="232.2" dur="4.21"> နာဇီစစ်သားများသည်ခေတ်မှီသော်လည်းလက်ဖြင့်လက်နှင့်လက်ဝှေ့ယမ်းနည်းစနစ်များကိုလေ့လာရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် >
< start="236.41" dur="3.94"> အမေရိကန်စစ်သားများသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရောနှောကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုသင်ယူခဲ့ကြသည်။ >
< start="240.35" dur="5.04"> ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်စစ်တပ်တစ်ခုလုံး၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးသောကိုယ်ခံပညာအစီအစဉ် >
< start="245.39" dur="5.179"> သေစေနိုင်သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကိုယ်ခံပညာအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည် >
< start="250.569" dur="1"> နည်းစနစ်များ။ >
< start="251.569" dur="3.911"> လက်ချင်းယှဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သားကထိပ်ဆုံးတွင်ရပ်နေသည် >
< start="255.48" dur="3.619"> ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရန်။ >
< start="259.099" dur="4.581"> စစ်သားနှစ် ဦး လုံးတွင်လက်သီးဆုပ်များနှင့်ပက်ကျိထဲ၌လက်သီးဆုပ်နေခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည် >
< start="263.68" dur="4.419"> ပွဲစဉ်, ငါတို့တိုက်ပွဲဝင်အလျင်အမြန်အောင်ပွဲအောင်မြင်ရန်ဤအလယ်တန်းကိရိယာများမှလှည့်လိမ့်မယ်။ >
< start="268.099" dur="4.111"> ကျွန်ုပ်တို့၏နာဇီစစ်သားသည် seitengewehr 98 ဓါး / လှံစွပ်ကိုသယ်ဆောင်လိမ့်မည်။ >
< start="272.21" dur="4.01"> ၁၅ လက်မအရွယ်ရှိဓါးဖြင့်သေစေနိုင်သောဓားကိုရှေ့တွင်ကပ်ထားနိုင်သည် >
< start="276.22" dur="1.749"> တစ်လှံစွပ်အဖြစ်ရိုင်ဖယ်။ >
< start="277.969" dur="4.44"> အမေရိကန်စစ်သားများသည်ဓားနှင့်လည်းမကြာခဏသယ်ဆောင်လေ့ရှိသော်လည်းအထင်ရှားဆုံးမှာအမေရိကန်သည်အမြစ်တွယ်နေသည် >
< start="282.409" dur="1.69"> တိုတိုအတွက် tool ကို, ဒါမှမဟုတ် e-tool ကို။ >
< start="284.099" dur="5.011"> e-tool သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ချွန်ထက်သောအနားများရှိသည့်ဂေါ်ပြားတစ်ခုအားအမေရိကန်စစ်သားအားလျင်မြန်စွာခွင့်ပြုသည် >
< start="289.11" dur="5.07"> သူ့ကိုယ်သူမည်သည့်မြေဆီလွှာတွင်မဆိုတိုက်ခိုက်ရန်နေရာတစ်ခုကိုတူးပါ၊ သို့သော်အမှန်တကယ်ပင်အကြီးအကျယ်ဆိုးရွားသောလက်များဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်သည် >
< start="294.18" dur="1"> လက်နက်။ >
< start="295.18" dur="3.93"> e-tool တစ်ခုမှ swing တစ်ခုသည်ရန်သူ၏ ဦး ခေါင်းခွံကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ကယ်ရန်ပင်လုံလောက်သည် >
< start="299.11" dur="3.229"> အကာအကွယ် ဦး ထုပ်မှတဆင့်ခေါင်းကို - လှုပ်ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း။ >
< start="302.339" dur="4.63"> ပြင်းထန်သောထိုးခြင်းလက်နက်နှင့်ပုဆိန်ကဲ့သို့သောလက်နက်များ၏အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် >
< start="306.969" dur="4.95"> နာဇီနဲ့မတူတာကငါတို့အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်ကိုဒီနေရာမှာအနိုင်ရအောင်လုပ်ပေးမှသာရမယ် >
< start="311.919" dur="4.15"> ဓား၊ အမေရိကန်အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာသည်တိုက်ပွဲများကိုအလျင်အမြန်တူးရန်လည်းပေးသည် >
< start="316.069" dur="2.84"> တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေကပို utility ကို။ >
< start="318.909" dur="5.4"> အနီးအနားတွင်နာဇီစစ်သားကကျော်ကြားသောပစ္စတိုသေနတ်သမား Walther P38 ကိုကိုင်ဆောင်ခဲ့သည် >
< start="324.309" dur="3.461"> မဟာမိတ်စစ်သားများကသူတို့ကိုစစ်အမှတ်တရလက်ဆောင်များအဖြစ်သူတို့ကိုရှာသောအခါ။ >
< start="327.77" dur="4.269"> မယုံနိုင်လောက်အောင် P38 သည်အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည် >
< start="332.039" dur="3.59"> သောင်းကျန်းသူတပ်ဖွဲ့များသည်၎င်းတို့အားနေတိုးစစ်သားများကိုပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ >
< start="335.629" dur="4.801"> ၉ မီလီမီတာကျည်ဆန်တစ်စင်းဖြင့်ပစ်ခတ်ထားသော P38 သည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၅၀ အထိရှိပြီးတိကျမှန်ကန်မှုရှိသည် >
< start="340.43" dur="3.43"> 25-50 မီတာထိရောက်သောပစ်ခတ်ရန်အကွာအဝေးရှိသည်။ >
< start="343.86" dur="5.33"> တစ်စက္ကန့်လျှင်မီတာ ၃၂၀ အရှိန်မြှင့်အရှိန်ဖြင့် P38 သည်စွဲမှတ်စရာကောင်းသောရပ်တန့်နိုင်စွမ်းရှိသည် >
< start="349.19" dur="1.279"> ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား။ >
< start="350.469" dur="4.521"> ၈ ပတ်သာမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်သာရှိသော P38 သည်နာဇီစစ်သားများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ >
< start="354.99" dur="5.399"> ပစ်မှတ်ကိုကြာရှည်စွာထိန်းထားရန်၊ ထုထည်ထက်တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်မှီခိုပါ >
< start="360.389" dur="1"> မီး >
< start="361.389" dur="3.691"> ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သည် Nazi P38 သည် Beretta M9 နှင့်ရေတွက်သည်။ >
< start="365.08" dur="5.079"> Resident Evil ဂိမ်းများအကြိုက်ဆုံး M9 သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ >
< start="370.159" dur="5.48"> M9 သည် ၉ မီလီမီတာပတ်ပတ်လည်နှင့် ၁၅ ပတ်မဂ္ဂဇင်းပါ ၀ င်ပြီးအလွန်စိတ်ချရသောလက်နက်ဖြစ်သည် >
< start="375.639" dur="3.691"> ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်စစ်သားသည်ပြန်လည်သိုလှောင်ရန်မလိုအပ်မီပိုမိုကြီးမားသောပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ >
< start="379.33" dur="5.199"> လက်နက်တွင်တစ်မိနစ်လျှင် ၃၈၁ မီတာရှိသောအမြန်နှုန်းရှိပြီးပိုမိုထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိသည် >
< start="384.529" dur="5.85"> နာဇီ P38 ထက်နှင့် ၁၀၀ တွင်နာဇီလက်နက်နှစ်ကြိမ်ကျော်အများဆုံးပစ်ခတ်နိုင်သောအကွာအဝေးရှိသည် >
< start="390.379" dur="3.051"> အများဆုံးထိရောက်သောအကွာအဝေးများအတွက်မီတာနှင့် 50 မီတာ။ >
< start="393.43" dur="4.34"> အများဆုံးနှင့်ထိရောက်သောပစ်ခတ်မှုအပိုင်းအခြားများနှင့်စွမ်းရည်နှစ်ဆနီးပါး၊ >
< start="397.77" dur="4.289"> ဤနေရာတွင်အနိုင်ရရှင်းလင်းစွာခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားနှင့်သူ၏ trusty M9 မှတတ်၏။ >
< start="402.059" dur="5.381"> အလတ်စားနှင့်တာဝေးပစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နာဇီစစ်သားသည် Karabiner 98k စံနှုန်းကိုသယ်ဆောင်သည် >
< start="407.44" dur="2.9"> ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျာမန်စစ်တပ်၏ရိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်း >
< start="410.34" dur="5.309"> K98k သည်အလွန်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးရိုင်ဖယ်ဖြစ်သည့်အာဖရိကမှစစ်မြေပြင်များတွင်စစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် >
< start="415.649" dur="5.04"> ရုရှားအရှေ့ဘက်မျက်နှာစာနှင့်ဆီးနှင်းနှင့်ရေခဲကဲ့သို့ရွှံ့နှင့်မိုးရွာသကဲ့သို့ကောင်းစွာလည်ပတ်ခဲ့သည်။ >
< start="420.689" dur="5"> ဒီလက်နက်မှာ ၇.၉၂ မီလီမီတာ caliber ပတ်ပတ်လည်မှာပါ ၀ င်ပြီးကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပေးလိမ့်မယ် >
< start="425.689" dur="4.591"> တစ်စက္ကန့်လျှင် ၇၆၀ မီတာရှိသောအရွယ်အစားနှင့်အသံကျယ်သောအမြန်နှုန်းကြောင့်ပစ်မှတ်သို့ရောက်သွားသည်။ >
< start="430.28" dur="4.219"> ရိုင်ဖယ်တွင်သံချွန်များဖြင့်မီတာ ၅၀၀ ထိထိရောက်သောပစ်ခတ်နိုင်သည့်အကွာအဝေးရှိခဲ့သည် >
< start="434.499" dur="4.051"> အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်မီတာ ၁၀၀၀ အထိတိကျသောမီးကိုလွှတ်ပေးဆဲဖြစ်သည်။ >
< start="438.55" dur="4.959"> ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမီတာ ၄,၇၀၀ အကွာအဝေးတွင်ရိုင်ဖယ်သည်အလွန်အကွာအဝေးများ၌ပင်ရှိနိုင်သည် >
< start="443.509" dur="4.53"> တိကျသော်လည်းတိကျသေချာသောပစ်မှတ်တစ်ခုပေါ်သို့ပစ်ချနိုင်လျှင်သေစေနိုင်သည်။ >
< start="448.039" dur="4.74"> ကံမကောင်းစွာပဲရိုင်ဖယ်သည်စွမ်းဆောင်ရည် ၅ မျိုးဖြင့်ကန့်သတ်ထားသဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည် >
< start="452.779" dur="1.47"> ပစ်မှတ်ဖိနှိပ်ရန်။ >
< start="454.249" dur="4.72"> အဲဒီအစား, ဂျာမန်ခြေလျင်ပျက်စေရန်, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူပူးတွဲစက်သေနတ်မှီခို >
< start="458.969" dur="1.23"> ရန်သူတပ်များ။ >
< start="460.199" dur="3.55"> ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်စစ်သားကသူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော M4 Carbine ကိုဤရန်ပွဲသို့ယူဆောင်လာသည်။ >
< start="463.749" dur="4.88"> ဆန့်ကျင်ဖက်အားဖြင့်ကောလဟလများရှိနေသော်လည်း M4 သည်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ >
< start="468.629" dur="4.57"> အင်တာနက်ပေါ်မှာဖတ်မယ့်အစားလယ်ကွင်းထဲကတစ်ခုခုသုံးဖူးသူတိုင်း >
< start="473.199" dur="5.25"> ရိုင်ဖယ်သည်အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးနှင့်ရောနှောနေသည့်တိုင်ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပစ်ရန်ပြnoနာမရှိကြောင်းဆောင်းပါးများသိထားသည်။ >
< start="478.449" dur="4.62"> ရိုင်ဖယ်နည်းနည်းတိုသောနေရာတွင်၎င်းသည် ၅.၅၆ ပတ်ပတ်လည်အခန်းများကိုရပ်တန့်နေသောကြောင့်ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းရှိသည် >
< start="483.069" dur="4.71"> အချိန်ကြာမြင့်စွာက၎င်း၏အော်ပရေတာများကအားနည်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည့်သုံးဆယ်ပတ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ >
< start="487.779" dur="3.36"> တစ် ဦး ပထမ ဦး ဆုံးပတ်ပတ်လည်သတ်ဘို့လုံလောက်သောရပ်တန့်ပါဝါမပေးဘို့။ >
< start="491.139" dur="5.721"> သို့သော်စက္ကန့် ၉၁၀ မီတာအမြင့်ရှိသံမဏိထိုးဖောက်နိုင်သောခဲယမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သည် >
< start="496.86" dur="2.759"> ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာသံချပ်ကာကိုဆန့်ကျင်။ ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ >
< start="499.619" dur="5.44"> ၎င်း၏ပစ်မှတ်အတွက်အမြင့်ဆုံးထိရောက်သောအကွာအဝေးမီတာ ၅၀၀ နှင့်အကွာအဝေးတစ်ခုအတွက်မီတာ ၆၀၀ >
< start="505.059" dur="2.181"> ပစ်မှတ်ကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလက်လှမ်းမမီပေးပါ။ >
< start="507.24" dur="4.509"> ထို့အပြင် M4 သည်ရွေးချယ်နိုင်သောမီးစွမ်းရည်ကိုပေးစွမ်းသည် >
< start="511.749" dur="4.931"> တာဝေးပစ်တိကျသေချာသောပစ်ခတ်ခြင်း (သို့) အနီးအနားရပ်ကွက်များအတွက် ၃ ခေါက်ပေါက်ကွဲခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ >
< start="516.68" dur="4.31"> ၎င်းသည်အကွာအဝေးသို့ရောက်သောအခါ၊ ရိုင်ဖယ်နှစ်မျိုးလုံးသည်ထိရောက်သောအကွာအဝေးရှိသည့်နှစ်ခုလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် >
< start="520.99" dur="4.96"> တစ် ဦး ပွိုင့်သို့မဟုတ်လူအရွယ်ပစ်မှတ် - သံမြင်ကွင်းများကိုအသုံးပြုပြီးမီတာ 500 ။ >
< start="525.95" dur="3.76"> ငါတို့စစ်သားတွေကအချင်းချင်းတိုက်နေတာထက်အများကြီးပိုတိုက်ခိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး၊ >
< start="529.71" dur="4.17"> ၎င်းထက် ကျော်လွန်၍ အကြီးအကျယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်သင်၏ပစ်မှတ်ကိုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေမြင်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ >
< start="533.88" dur="5.01"> K98k သည် M-4 ကိုပိုမိုကြီးမားသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ကျော်လွန်၍ အနီးကပ်ပျက်စီးစေနိုင်သည် >
< start="538.89" dur="1.19"> အလတ်စားပ္ပံရန်။ >
< start="540.08" dur="4.36"> သို့သော် M-4 ထက်ပိုနိမ့်သောနှာခေါင်းအလျင်ဖြင့်ကြီးမားသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သေစေလောက်သည် >
< start="544.44" dur="4.21"> သူသွားရမည့်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချသည် >
< start="548.65" dur="4.68"> အမေရိကန်ခြေလျင်တပ်ဆင်ထားသောစံခန္ဓာကိုယ်သံချပ်ကာအားဖြင့်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခုကိုအလွယ်တကူရပ်တန့်ပစ်နိုင်သည် >
< start="553.33" dur="1.2"> အများဆုံးပ္ပံ။ >
< start="554.53" dur="4.47"> နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် M-4 မဂ္ဂဇင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့် M-4 ပစ်ခတ်မှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည် >
< start="559" dur="4.41"> ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားတစ် ဦး မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အားသာချက်တစ်ခုအားမီးတိုက်ခြင်းနှင့်စွမ်းရည် >
< start="563.41" dur="2.98"> အနီးကပ်ရပ်ကွက်တိုက်ခိုက်ရေးများအတွက် 3- ပတ်ပတ်လည်ပေါကျကှဲမီးပြောင်းပါ။ >
< start="566.39" dur="4.49"> တစ်ညှပ်နှင့်အတူသုံးအကြီးအကျယ်ကြိမ်ကယ်နှုတ်နိုင်ကြောင်းအနီးကပ်အကွာအဝေးမှာဆိုလိုသည် >
< start="570.88" dur="5.33"> M4 သည် K98k ကိုမောင်းနှင်နိုင်သော်လည်း M-4 သည်မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစားနှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းထက်သာလွန်သည် >
< start="576.21" dur="2.98"> အဖြစ်ကောင်းစွာအလယ်အလတ်မှရှည်လျားသောပ္ပံမှာထိပ်ပေါ်မှာ။ >
< start="579.19" dur="4.54"> အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နာဇီစစ်သားတစ်ယောက်သည်အချိန်အတော်ကြာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သွားလာကြည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်ဖြစ်သည် >
< start="583.73" dur="4.13"> K98k ကတိကျမှန်ကန်သောကြောင့်ခြေလျင်တပ်သားသည်အကွာအဝေးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနီးကပ်စွာထားနိုင်ခဲ့သည် >
< start="587.86" dur="2.83"> M4 သည်ထိရန်မျှော်လင့်မထားသည့်အကွာအဝေးတွင်မီးလောင်ခဲ့သည်။ >
< start="590.69" dur="4.02"> အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်နီးကပ်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားအားအနိုင်ရရှိစေသည်။ >
< start="594.71" dur="4.59"> သို့သော်အလွန်ဝေးကွာသောနေရာတွင်နာဇီစစ်သားနှင့်သူ၏စွမ်းရည်ကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည် >
< start="599.3" dur="4.49"> ထွက် ၁၀၀ ကိုက်အကွာအထိရှိသောတစ်ယောက်ယောက်ကိုထိတွေ့ပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တိကျမှုနှင့်အတူ။ >
< start="603.79" dur="4.55"> အဆုံး၌, ငါတို့ခရီးသွားလာနာဇီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အားသာချက်ရှိပါတယ် >
< start="608.34" dur="4.57"> သူ၏နှစ်များ၌အမျိုးသားရေးဟစ်တလာလူငယ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအားသာချက်ရှိသည် >
< start="612.91" dur="5.12"> K98k ရိုင်ဖယ်၏တိကျမှုနှင့်အကွာအဝေးကြောင့်အလွန်အမင်းရှည်လျားသောအကွာအဝေးမီး။ >
< start="618.03" dur="4.48"> သို့သော်အခြားဒေသများရှိခေတ်သစ်အမေရိကန်စစ်သားတစ် ဦး သည်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကြီးစိုးနေသည် >
< start="622.51" dur="4.71"> လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၈၀ ကျော်အတွင်းသင်တန်းအစီအစဉ်များနှင့်ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကိုများစွာအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ >
< start="627.22" dur="4.54"> သင်သဘောမတူနိုင်ပါကမည်သူနှစ် ဦး အနက်တစ် ဦး သည်တစ် ဦး ကိုသာအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သနည်း >
< start="631.76" dur="1.19"> သေမင်းကို >
< start="632.95" dur="3.55"> မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ယခုသင်အဆုံး၌ရှိနေသည်ဆိုပါကဘာကြောင့်မစောင့်ဘဲနေပါသနည်း >
< start="636.5" dur="4.93"> ပါတီကဒီမှာဗွီဒီယိုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သွားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဒီကိုဒီမှာကြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ် >
< start="641.43" dur="1"> အစား?! >
< start="642.43" dur="3.13"> အလျင်အမြန် နှိပ်၍ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ခိုက်သူများနှင့်မတူပါ၊ သင်ရှုံးနိူင်သည်။ >